FAQs - Jinghui Environmental Teknolojia Co., Ltd.
Soso-kevitra momba ny mividy evaporative rivotra mangatsiaka kokoa:
1, jereo ny endriky:
Arakaraka malefaka sady tsara tarehy ny fahitana izany, ny ambony lasitra fametrahana mazava tsara ny vokatra ampiasaina.
2, jereo ny dingana mikoriana:
Rehefa mividy ny vokatra, dia tokony ho azo antoka ny toerana manambatra, ny screws, ny hanoto-bokotra sy ny singa hafa dia tsara napetraka sy mifandray mafy.
3, Zahao ny singa:
Ny rehetra dia nivory napetraka amin'ny faritra isan-karazany sy ny singa. Ny hatsaran'ny ireo singa mety hisy fiantraikany mivantana amin'ny fanompoana ny mangatsiaka kokoa ny fiainana sy ny hihena vokany. Noho izany, jereo ny singa lehibe no zava-dehibe indrindra. Ny singa lehibe ny rivotra mangatsiaka kokoa Evaporative dia ahitana: ny tena fanaraha-maso ny boaty, paompy rano, tatatra miditra tsimoramora, maotera, blower.
Fampiharana ny evaporative rivotra coolers
1, naneno faritra na ny faritra izay mila hihena haingana ao anatin'ny fotoana fohy
ohatra sekoly, lakozia, fanaovana fanatanjahan-tena, orinasa, fiangonana, tsena, efitrano fampirantiana, fihaonambe efitrano.
2, ny famokarana toerana avo fitaovana fanafanana hafanana
ohatra ny atrikasa ny Mounding tsindrona, electroplating, mpampatsiro hanina, fanontam-pirinty, Glass, machining, fanodinana sakafo sy ny ankohonany herinaratra orinasa
3, ny faritra izay feno fofona, vovoka, voaloto rivotra
ohatra Hotel lakozia, efitrano hopitaly, plastika orinasa, orinasa simika, hoditra orinasa, fingotra orinasa, orinasa fanontam-pirinty sy ny Fandokoana, lamba orinasa, toeram-pambolena etc.
4, faritra lehibe misokatra
ohatra lisitry ny tsenambarotra, fivarotana lehibe, voly, fialam-boly foibe, miandry efitrano etc.
5, entona sy ny fikarohana siantifika fambolena base
1, Evaporative rivotra mangatsiatsiaka kokoa fotsiny any no ampiasaina mba hidiran'ny rivotra, hihena, humidification, hanatsarana ny kalitaon'ny rivotra. Fa hafa ihany, pls manatona ny JH injeniera na mivarotra mialoha.
2, amin'ny fampiasana rivotra mangatsiaka kokoa eo ambanin'ny toe-javatra manaraka ireto dia afaka mampitombo ny fiainana:
a) Dry-jiro hafanana: 20 -50 ℃ ℃
b) Havana Vlažnost: ≤85%
c) Pression: 86Kpa-106Kpa
d) Aoka ho azo antoka fa madio ny rano ampiasaina , ary ny mari-pana ho ambany noho 45 ℃, ny famatsiana ny tsindry dia 0.15-1Mpa;
e) ny famatsiana malefaka tsy azo indrindra ± 15% ny tahan'ny malefaka
f) tsy misy entona manimba tsikelikely faritra
3, ny akorany sy ny fonosana ivelany ny mangatsiatsiaka kokoa fotsiny any dia tsy tanteraka atao amin'ny afo retardant fitaovana. Aza adino ny manakana azy avy amin'ny loharanom-afo.
4, Raha ny fahavoazana avy amin'ny leakage, azafady ho azo antoka ny tatatra miditra tsimoramora sy ny Inlet miditra tsimoramora mifandray tsara amin'ny fampiasana mifandray alohan'ny rivotra mangatsiaka kokoa.
5, mba tsy fanatanterahana tony rivotra ho fonosina tany, dia tsy maintsy ho ampy amin'ny fampiharana setroka be toerana, raha tsy izany, dia afaka manokatra ny varavarankely na hametraka anther manambitamby milina hafa mba hahatonga ny setroka sy ny mekanika voajanahary setroka mitambatra.
6, raha ny tokony hanamboarana mangatsiatsiaka kokoa fotsiny any, dia ilaina ny hikapa ny hery famatsiana dia nanisy soratra fampitandremana hoe "fikojakojana ary tsy ampiasaina".
7, Rehefa mangatsiatsiaka kokoa fotsiny any napetraka fitsangatsanganana, miantso vonjy ny fanompoana, ary tsy hanova ny fiarovana jiro eo ihany.
8: Masìna ianao, aza miala amin'ny matetika sy eny amin'ny coolers
9, Ny amin'ny mari-pana sy ny hamandoana tsy tapaka toerana, pls mampiasa azy io ambanin'ny mpitari-dalana ny manam-pahaizana manokana .Ny tahan'ny hihena dia inversely mitanila ny rivotra hamandoana.
1, Clean hihena pad
Esory ny pad avy amin'ny mangatsiatsiaka kokoa fotsiny any, ary avy eo hanadio azy amin'ny rano paompy
2, Esory ny fofona
ny toe-javatra manaraka ireto dia mety hahatonga ny sasany hanitra ankasitrahana amiko ny minitra vitsy rehefa manomboka ny mangatsiaka:
1) Ampiasao ny mangatsiaka kokoa rehefa latsaka ny ranonorana
2) Raha tsy hanadio ny fiara rehefa avy, ny rivotra mety ho tony ny sasany manimbolo amin'ny manaraka rehefa mampiasa azy io. (Hanakatona asa madio niova intsony)
3) Aza manadio ny mangatsiaka kokoa ara-potoana taorian'ny fampiasana ela. (Auto asa madio niova intsony)
4) toe-javatra hafa.
Amin'ny ankapobeny ny nanolorana azy ho mitodika amin'ny fanakatonana madio miasa mba hisorohana ny fofona.
Manantena manadio ny hihena fisaka sy mivelatra eo amin'ny fotoana, dia afaka ihany koa ny manampy chlore karbonika famonoana bibikely any amin'ny rano tanky.
3, ny fomba fikojakojana ny mangatsiatsiaka kokoa fotsiny any, rehefa tsy mampiasa azy io nandritra ny fotoana kelikely?
Rehefa amin'ny ririnina na tsy mampiasa ny coolers nandritra ny fotoana kelikely, azafady ataovy izao manaraka izao:
Voalohany, manakatona ny rano miditra tsimoramora, ary manala ny hihena pad mba manana fanadiovana tanteraka araka ny hita etsy ambony, tamin'izany andro izany, ny entana ao tanky sy ny madio izany. Raha fahazoan-dalana, dia tsara kokoa ny manana nivadihan'ireo. Rehefa avy fanadiovana, mametraka ny hihena pad sy manao ny mangatsiatsiaka kokoa fotsiny any miasa 5 ka hatramin'ny 8 minitra mba ho maina ny pad, ary amin'ny farany dia hanakatona ny fahefana famatsiana. Ho tsara kokoa ny Hood fiarovana fonony mba hampitsahatra ny vovoka ivelany.
4, jereo alohan'ny asa: dia ny mitsingevana baolina miditra tsimoramora niasa tsara? Ve ny fanaraha-maso araka ny tokony ho raikitra andalana? Solika ny vokany raha centrifugal karazana. Jereo ny hihena fisaka sy mivelatra aorian'ny fandidiana nandritra ny fotoana kelikely. Jereo ny asa ara-dalàna hafa.
5, Evaporative rivotra mangatsiatsiaka kokoa fotsiny any dia karazana angovo-mamonjy fitaovana ary ny sasany ihany no mila fikojakojana. Fa tahaka ny milina dia nametraka ivelany, mba manana vokany hihena tsara kokoa, ny tsara ho anao ny hanao fanadiovana ny sasany rehefa ela mampiasa.
Error fehezan-dalàna fahadisoana famantarana vahaolana
E1 Ny hery famatsiana ny rivotra mangatsiatsiaka kokoa fotsiny any amin'izao fotoana izao dia eo- Azafady mandika ny hery intsony; ary jereo ny hery famatsiana
E2 Ny famatsiana ny rivotra malefaka mangatsiatsiaka kokoa fotsiny any Tapitra-malefaka Azafady mandika ny hery intsony; ary jereo ny hery famatsiana
F3 Ny famatsiana ny rivotra malefaka mangatsiatsiaka kokoa fotsiny any dia eo ambany-malefaka Azafady mandika ny hery intsony; ary jereo ny hery famatsiana
F4 Ny maotera dia overheat Azafady mandika ny hery intsony; ary jereo ny hery famatsiana
hijery fisaka sy mivelatra ny hihena
mpiandry vavahady nisokatra ho ampy rivotra
F8 Ny rindrina mpitandrina dia tsy afaka handray ny tsato-kazo famantarana avy amin'ny rivotra mangatsiaka kokoa Tandremo tsara ny fifandraisana tsara eo amin'ny fifandraisana interface tsara
F9 Ny rano tsy azo asa vita ao anatin'ny 15mins Jereo ny Inlet miditra tsimoramora
Common olana & Soso-kevitra fikarohana onitra
Olana: Fizarana ny hihena fisaka sy mivelatra dia tsy lena
Soso-kevitra fikarohana onitra:
(1) Ny rano Distributor voasakana, azafady manadio azy.
(2) Ny rano no hitongilanan'ny tanky, azafady hanitsy azy ho any amin'ny ambaratonga.
(3) Low rano.
Olana: mitempo manosika ny mihazakazaka izany, fa tsy Mivezivezy rano, na rano tsy fisaka sy mivelatra.
(2) Pump strainer voasakana
Olana: Ny hihena kisary mifandrambondrambona amin'ny maso
(1) Fampitandremana izay ambany rano, jereo ny rano miditra tsimoramora Inlet fanakanana na rano loharano nijanona famatsian-drano.
(2) Raha mbola manelatselatra raha ny rano dia ampy, jereo ny haavon'ny rano fangadiana.
(3) Pump strainer voasakana
Olana: Water leakage
(1) avy amin'ny famatsian-drano Leakage sodina: Ny malefaka-Hose dia be taona na ny misy tapaka sy ny rano leakages avy amin'izany. Mba hanova vaovao-Hose hentitra loatra.
(2) Leakage avy amin'ny tatatra miditra tsimoramora: ny rano haavon'ny avo loatra. Mba hanitsy ny rano Inlet miditra tsimoramora.
(3) avy amin'ny lafiny Leakage tontonana: hihena fisaka sy mivelatra no voasakana, azafady manadio azy.
Olana: Ny maso tsy afaka maneho
(1) Hamarino fifandraisana herinaratra. Ataovy azo antoka ny fiarovana fitaovana elektrika miasa.
(2) Mba jereo ny tany tariby dia mifandray tsara. Ataovy azo antoka fa dingana andalana dia mifandray tsara. Hamarino raha tapaka nipoiran'io fitroarana.
(3) Hamarino ny tsato-kazo famantarana tsipika mifandray mafy.
Olana: 3PH mangatsiaka kokoa tsy mahavita miasa, ny maotera fampidirana ny Buzz.
(1) tsy ampy ny dingana Power, dia mila mijery ny fahefana famatsiana.
(2) Hamarino ny maotera sy ny herinaratra PCB birao mahantra fifandraisana na tsia.
Raha ny mety antony dia sarotra ny nahita, dia afaka mahatakatra izany amin'ny fomba hanoloana, fampitahana fomba, ny cameral fomba na fomba hafa. Raha tsy izany, dia afaka mangataka ny eo an-toerana ihany koa ny mpizara, na mivarotra fanampiana.